အားလုံးရဲ့ ……………. ပုဂံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » အားလုံးရဲ့ ……………. ပုဂံ	10
အားလုံးရဲ့ ……………. ပုဂံ
Posted by အောင် မိုးသူ on May 13, 2015 in Photography, Travel | 10 comments
အလုပ်က ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းကနေ ဓာတ်ပုံရောဂါ စရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ တကယ်တော့ အလုပ်နဲ့လည်း တော်တော်လေးကို ဆက်စပ်မှုရှိတာကိုး။ အဲသည်အလုပ်က ထွက်ပြီး တစ်နှစ်ကြာကြာလောက်ထိ Freelance အနေလောက်ပဲ လုပ်နေခဲ့ရင်းကနေ စင်ကာပူကို သွားကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်အပြီးမှာ ဆွေမျိုးတွေထဲက အဒေါ်တစ်ယောက်က တစ်မျိုးလုံးကို ပုဂံလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ ပုဂံကို သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူးလေ။
ဓာတ်ပုံကလည်းရိုက်ချင်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Canon Kiss လေး ၀ယ်ထားတာနဲ့ သုံးရက်လောက် ငှားပါဆိုပြီး မလာတော့တယ်။ သူငယ်ချင်းကလည်း အရမ်းခင်မင်တော့ စိတ်ရှိသလောက်သုံးပေါ့။
ပြောသာပြောရတယ် ငှားထားတဲ့ ကားက ဒရိုင်ဘာမကောင်းတော့ အေးဆေးမနေရဘဲ ပြေးလွှားကတိုက်ကရိုက်ဘုရားဖူး ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ထမင်းဆိုင်ဆိုလည်း ချိုချောင်မကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုပို့။ ပုဂံဘက်ဆိုတာ ထမင်းဟင်းအရမ်းကောင်းတာ ကြားဖူးတာလေ။ စိတ်တွေတိုနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ အနည်းငယ်သာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ခုပုံလေးတွေကတော့ Resolution ကောင်းကောင်းလေးတွေ နဲ့ တင်ဖြစ်လိုက်နိုင်တယ်။
အခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကျရင်သော တစ်ပတ်လောက်အေးအေးဆေးဆေး ခရီးထွက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သေးတယ်။ ထုမှာ ဓမ္မရံတဲ့
နံပါတ်(၁၁) အဒေါ်အငယ်ဆုံးရဲ့ သမီေးလးပါ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ညီမလေးပေါ့။ နံနက်စောစော ရွှေစည်းခုံမှာ လျှပ်တစ်ပြတ် ရိုက်ခဲ့တာ။
ဒီပုံကတော့ ကျတော်ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ညီလေးရိုက်ပေးတာပါ။ ကျွန်တော်ညီမလေးတွေချည်းပါပဲ။
ကျွန်တော်က နံပါတ်(၅)ဆို သူက နံပါတ်(၃)ပါ ကျွန်တော့်အစ်မအရင်းနဲ့ သူ့သမီးလေးပါ။ နေအထွက်လေးမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေး။ ကျွန်တော်က နာမည်ပေးထားတယ်။ You Are My Sunshine လို့။
နံပါတ် (၈) ကျွန်တော့်အဒေါ်နဲ့ သူ့သမီးလေးပါ။ သူများရိုက်နေတာကို ကျွန်တော်အမှတ်မထင်ရိုက်ထားတာပါ။
ကိုယ်ကပဲရိုက်ပေးနေတော့ ကိုယ့်အလှည့်ကျ အပြေးအလွှား ညီလေးကိုရိုက်ခိုင်းရတယ်။
ဘကြီး အောင် has written 204 post in this Website..
View all posts by အောင် မိုးသူ →	Blog
ခင်ဇော် says: ပထမ ပုံ က အမ နဲ့ ဆင်တူ ရှိတယ်..
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ပါ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: လှလိုက်တာနော်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 372
ကြည်ဆောင်း says: ဒီပုံတွေကိုမြင်တော့ ပုဂံကိုလွမ်းတယ် . . . .
2 ခေါက်ရောက်ဘူးပေမဲ့ ထပ်ပြီးသွားချင်နေတုန်းဘဲ
uncle gyi says: ပုဂံပုံလေးတွေလှ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: ပုဂံတော့ ဘယ်နှစ်ခေါက်ရောက်ရောက် မရိုးနိုင်
တီအိ..ရိုက်လာတဲ့ ပုဂံ ကိုလဲ တင်ဦးမှ…
အောင် မိုးသူ says: တင်ပါ တီရေ။
Mike says: .ပုံလေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျို့
Alinsett @ Maung Thura says: နိပုံ အလှဇုံးးးးပဲ ထားလိုက်
အောင် မိုးသူ says: နာက လှပီးသားလေ။ ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် ကတိုက်ကရိုက်လည်း လှပီးသား။ အဲ့ဒါတော့ မပြောလည်းသိတယ်။